Waa maxay Coronavirus? Waa maxay astaamaha Covid-19? Sideen isaga Badbaadi Karaa Wadaadka-19? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaa maxay Coronavirus? Waa maxay astaamaha Covid-19? Sidee looga Badbaadi Karaa Wadaadka-19?
20 / 03 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Waa maxay astaamaha lagu garto cudurka 'coronavirus'?
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) ayaa ku daabacday fayl macluumaad balaaran oo ku saabsan coronavirus websaydhkeeda. http://www.ibb.istanbul Dadka booqda cinwaanka waxay hayaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cudurka oo ay uga mahadcelinayaan soo-qaadista.
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku daabacday faylal macluumaad balaaran websaydhka ku saabsan cudurka loo yaqaan 'coronavirus', kaasoo noqday dhibaato caam ah oo daboolay adduunka oo dhan. Maanta laga bilaabo http://www.ibb.istanbul Soo booqdayaasha websaydhku waxay yeelan doonaan aqoon dhameystiran oo ku saabsan cudurka iyagoo gujinaya daaqadda furitaanka. Qoraalka wargelinta ah ee lagu sameeyay bogga ayaa ah sida soo socota:
CORONAVIRUS CUSUB 2019 - nCoV DISEASE
Coronaviruses (CoV) waa qoys ballaaran oo fayras keena sababa cuduro kala duwan, min qabow fudud ilaa cudurro aad u daran sida Cudurka neef-mareenka ee Bariga Dhexe (MERS-CoV) iyo Astaamaha daran ee neef-mareenka (SARS-CoV).
COVID-19 waa cudur faafa oo ka dhasha coronavirus-kii ugu dambeeyay ee la helay. Fayraskan cusub iyo cudurka faafa lama oga kahor intuusan kasoo bixin Wuhan (Shiinaha) bishii Diseembar 2019.
Bishii Disembar 31, 2019, Xafiiska Wadanka ee WHO ee dalka Shiinaha ayaa ka warbixiyay kiisaska cudurka sambabka ee loo yaqaan 'etiology' oo aan la garanayn oo ku yaal Wuhan, Shiinaha.
Bishii Janaayo 7, 2020, wakiilka waxaa loo aqoonsaday inuu yahay coronavirus cusub (2019-nCoV) oo aan horay loogu arkin bini-aadamka.
Waxaa la ogaaday in laga heli karo bini-aadamka, fiidmeerta, doofaarka, bisadaha, eeyaha, jiirka iyo digaagga (xayawaanka guryaha iyo duurjoogta ah).
WAA MAXAY Astaamaha COVID-19?
Calaamadaha ugu caansan ee COVID-19 waa qandho, xumad iyo qufac qalalan. Bukaanka qaar ayaa sidoo kale la kulma xanuun, ciriiriga sanka, sanka oo duuf ah, cuna xanuun ama shuban. Calaamadahaani caadi ahaan way sahlan yihiin waxayna dhacaan tartiib tartiib.
Dadka qaar ma laha astaamo inkasta oo ay cudurka qabaan oo ay dareemayaan wanaag. Bukaanka badankood (qiyaastii 80%) wey soo kabtaan iyagoo aan u baahnayn daaweyn gaar ah. Qiyaastii hal qof lixdii qof ee qaba cudurka waxay leeyihiin astaamo aad u daran, oo ay ku jiraan dyspnea.
Dadka da'da ah iyo kuwa kale ee qaba dhibaatooyinka caafimaad (Dhiig karka, dhibaatooyinka wadnaha ama sonkorowga) waxay u badan tahay inay yeeshaan astaamo halis ah. Qiyaastii 2% dadka buka ayaa la waayey.
Calaamadaha caamka ah ee caabuqa; astaamaha neefsashada waa qandho, qufac, iyo dyspnea. Xaaladaha aadka u daran, oof wareenka (oofwareen), infekshan daran oo neef mareenka ah, kelyo xanuun, iyo xitaa dhimasho ayaa laga yaabaa inay soo baxaan.
SIDEE AYUU CELID-19 U DARAARAA?
Waxaa lagu kala qaadaa dadka qaba fayraska COVID-19. Cudurka wuxuu ku faafikaraa qof ilaa qof iyadoo loo qaadayo dhibic neefsashada (qurubyada) oo lagu tuuro sanka ama afka markii qofku qufaco ama hindhisto. Dhibcahan waxaa laga heli karaa walxaha ama dusha sare ee qofkaas. Haddii aad taabato indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga ka dib marka aad taabato walxahaas ama sagxadaha, waxaad ku qaadsiin kartaa COVID-19. COVID-19 waxaa kale oo lagu kala qaadi karaa iyada oo dhibco laga nuugo qofka buka ee qufaca ama hindhisada. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in laga fogaado qof jiran jir mitir.
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu dib-u-eegis ku sameynayaa cilmi-baaris joogto ah oo ku saabsan sida COVID-19 uu u fidayo wuxuuna sii wadi doonaa inuu soo sheego natiijooyinka la cusboonaysiiyay
VIRUS MA KA SAMEEYAA COVID-19 BY AIR?
Daraasadaha la sameeyay ilaa maanta waxay soo jeedinayaan in fayraska mas'uulka ka ah COVID-19 lagu kala qaado markii la taabto dhibcaha neefsashada halkii ay hawada ka mari lahaayeen.
MA KA HELI KARAA-19 QOFKA AAN AAN LOO SAMEEYAY?
Cudurku wuxuu ku faafaa dhibcaha neefsashada, oo inta badan laga tirtiro qufaca dadka. Halista aad ugu bukoon karto COVID-19 qof aan lahayn astaamo waa mid aad u hooseeya. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa leh astaamo fudud. Tani waxay si gaar ah run u tahay marxaladaha hore ee cudurka. Sidaa daraadeed, waa suurtagal in lagu qaadsiiyo COVID-19, tusaale ahaan, kaliya oo lala xiriiro qof qaba qufac fudud, laakiin aan dareemin xanuun. WHO ayaa dib u eegis ku sameyneysa daraasad joogta ah oo ku saabsan go'doominta waqtiga ku habboon ee kuwa wajahaya Covid-19 waxayna sii wadi doontaa inay ka warbixiso natiijooyinka la cusbooneysiiyay
CVEID-19 Miyaa lagu qaadaa STOOL?
Khatarta ah in cudurka wasakhaysan ee cudurka qof qaba cudurka COVID-19 uu u muuqdo mid hooseysa. Baadhitaannadii hore waxay muujinayaan in fayrasku ku jiri karo saxarada xaaladaha qaarkood, laakiin dillaacku sida ugu badan ugama faafo sidan. WHO ayaa dib u eegis ku sameyneysa daraasad joogta ah oo ku saabsan sida COVID-19 uu u fidayo waxayna sii wadi doontaa inay gudbiso natiijooyinka cusub. Si kastaba ha noqotee, maadaama khatartu ay jirto, waa qiyaas dheeri ah inaad gacmahaaga dhaqdid si joogto ah markaad isticmaasho musqusha iyo ka hor cunida.
SIDEE AYAAN KU HABBOON KARAA KARAAN HARGEEYA SIDEE AYAAN KA HORTAGA CUDURKA?
Tallaabooyinka ilaalinta ee qof walba: Raac macluumaadka ugu dambeeyay ee faafitaanka cudurka 'COVID-19', oo laga heli karo websaydhka WHO iyo ku dhawaaqida Wasaaradda Caafimaadka. COVID-19 wali wuxuu ku dhacaa dad badan oo Shiinaha ah, faafitaano ayaa sidoo kale ku faafaya dalal kale. Badanaa dadka cudurka qaba waxay leeyihiin astaamo sahlan oo ay ka ladnaadaan, laakiin kuwa kale waxay yeelan karaan nooc ka xanuun badan. Daryeel caafimaadkaaga ilaali dadka kale adoo raacaya talooyinka hoos ku qoran:
Ku dhaq gacmahaaga si joogto ah iyo biyo biyo ah biyo ama saabuun iyo biyo. Maxaa yeelay, Gacmahaaga ku maydh biyo biyo ah ama saabuun iyo biyo ayaa dilaya fayraska haddii aad qabtid.
Ugu yaraan hal mitir ka fogee dadka kale ee qufaca ama hindhisada. Maxaa yeelay, Marka qofku qufaco ama hindhisto, waxay keenaan dhibco yar yar oo fayras ku jiri kara. Haddii aad aad ugu dhowdahay, waad neefsan kartaa dhibicyadan oo markaa markaa fayraska mas'uulka ka ah COVID-19 haddii qufacu yahay side.
Ka fogow taabashada indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga. Maxaa yeelay, Gacmuhu waxay xiriir la leeyihiin sagxado fara badan oo faddarayn kara fayraska. Haddii aad taabatid indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga, fayrasku jirkaaga wuu geli karaa wuuna bukoon karaa.
Haddii aad caafimaad dareento, guriga joog. La tasho dhakhtar haddii ay dhacdo qandho, qufac iyo neefsasho gaaban. Raac tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka. Maxaa yeelay, Wasaaradda Caafimaadka waxay haysaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda adduunka iyo gobolkaaga. Dhakhtarkaaga qoyska ayaa dhakhso kuugu gudbin kara rugta daryeelka caafimaadka ee ugu habboon. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaa ilaalin doontaa oo ka hortagtaa faafitaanka fayraska iyo wakiilada kale ee la is qaadsiiyo.
Raac takhtarkaaga, maamulada dalka iyo degmada, ama talo ku saabsan sida aad naftaada iyo dadka kale uga ilaalin karto COVID-19. Maxaa yeelay, Macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan fiditaanka COVID-19 ee deegaankaaga waxaa heli kara maamulada dalka iyo kuwa maxalliga ah. Talooyinka ugu saxsan ee ku saabsan badbaadinta sidoo kale waa laga hadli karaa iyaga. La soco wixii soo kordha ee ugu dambeeyay COVID-19.
Markaad qufacayso ama hindhisayso, ku dabool afkaaga iyo sankaaga xusulka gudaha ama gogosha oo si dhakhso leh tuur weelka. Maxaa yeelay, Dhibcaha neefsashada ayaa keena fayras. Adigoo raacaya xeerarka nadaafadda neefsashada, waxaad dadka ka ag dhawrisaa fayrasyada sida hergebka, ifilada ama COVID-19. Hubso inaad raacdo qawaaniinta nadaafadda neefsashada dadka kugu dhowna sidaas oo kale ayey yeelaan.
Tallaabooyin looga hortagayo dadka booqday meelaha ay COVID-19 ku fidday (14kii maalmood ee la soo dhaafay):
Raac talooyinka kor lagu soo sheegay. (Tallaabooyinka ilaalinta ee qof walba)
Haddii aad bilowdo inaad dareento xanuun, xiitaa haddii aad leedahay astaamo sahlan sida madax xanuun iyo san duuf ah, ha ka tegin guriga illaa aad ka bogsato. Maxaa yeelay, Ka fogaanshaha xiriirada lala yeesho dadka kale isla markaana aan aadin xarumaha caafimaadka ee ka baxsan baahi daruuriga waxay u saamaxaysaa xarumahaani inay si hufan u shaqeeyaan, iyagoo adiga iyo dadka kale ka difaacaya cudurada kale ee fayruuska leh ee COVID-19.
U raadso daryeel caafimaad isla markiiba haddii ay dhacdo qandho, qufac iyo neefsashada oo yaraata, maaddaama ay noqon karto caabuq xagga neefsashada ah ama xaalad kale oo halis ah. Wac takhtarkaaga oo soo sheeg haddii aad dhawaan safar gashay ama aad la xiriirtay safar. Maxaa yeelay, Haddii aad soo wacdid, dhaqtarkaaga ayaa dhaqso kuu gudbin kara rugta daryeelka caafimaadka ee ugu habboon. Waxay kaloo kaa ilaalin doontaa ka hortagidda faafitaanka COVID-19 iyo cudurro kale oo fayras ah.
WAA MAXAY SAMEEYAA IN AY SAMEEYAAN COVID-19?
Halistu waxay kuxirantahay meesha aad ku nooshahay ama aad safar ku tagtay. Waxay ku badan tahay gobollada laga helo COVID-19 in kabadan hal qof. Waqtigaan, 19% kiisaska COVID-95 waxay ka dhacaan Shiinaha, intooda ugu badan waxay ka tirsan yihiin gobolka Hubei. Qaybo kale oo badan oo adduunka ah, halista qaadashada COVID-19 ayaa hadda ah mid hooseysa, laakiin runtii waa inaad raacdaa xaalada iyo dadaalka u diyaarinta aaggaaga.
WHO waxay la shaqeysaa saraakiisha caafimaadka ee Shiinaha iyo adduunka oo dhan si ay ula socdaan ugana jawaabaan faafitaanka COVID-19.
CVEID-19 miyay igu qasbeysaa?
Haddii aadan joogin gobol COVID-19 ku fiday, kama soo noqonin mid ka mid ah aagaggan, ama aadan xiriir dhow la lahayn qof jiran, halista aad u bukoontaa hadda way hooseysaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu wajihi karaa faham ah inaad walwasho ama walwal ka qabtid xaaladdan. Sidaa darteed, waa inaad ku tiirsanaataa macluumaadka iyo macluumaadka ugu dambeeyay iyo xogta si aad u ogaatid khataraha saxda ah ee aad kala kulanto si aad uga taxadaraan macquul. Dhakhtarkaaga qoyska iyo saraakiisha MoH ayaa ku siin kara macluumaad sax ah oo ku saabsan COVID-19 iyo jiritaanka aaggaaga.
Haddii aad ku sugan tahay meel uu ka dillaacay COVID-19, waa inaad si taxaddar leh u qaadataa halista cudurka. Raac talooyinka maamulayaasha caafimaadka iyo kuwa maxalliga ah. In kasta oo COVID-19 ay u keento kaliya astaamo sahlan dadka badidooda, dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay si ba'an u saameeyaan. Inta dhif ah, cudurka wuxuu noqon karaa mid dilaa ah. Dadka da'da ah iyo kuwa horeyba u qabay dhibaatooyin caafimaad kale (sida dhiig karka, dhibaatooyinka wadnaha, ama sonkorowga) waxay umuuqdaan kuwa u nugul cudurka. (Haddii aad booqatay meelaha COVID-19 ku fiday (14kii maalmood ee la soo dhaafay) ama haddii aad la joogto dadka booqday, arag Tallaabooyinka Ka-hortagga.)
KEE AYU KU HAYA khatarta kobcinta xaalad caafimaad oo xanuun ah?
In kasta oo aan wali u baahanahay inaan sii xoojino aqoonteena sida COVID-12 u saameeyso shaqsiyaadka, ilaa iyo haatan, dadka waayeelka ah iyo dadka horeyba u xanuunsanaa cudurada kale (sida dhiig karka, sonkorow ama wadne xanuun) waxay umuuqdaan kuwa si isdaba joog ah u saameeya kuwa kale.
ANTIBIOTICS wax ku ool ah oo ku saabsan ka hortagga ama DAAWADA COVID-19?
Maya, antibiyootigyadu waxay wax ka tarayaan oo keliya ka hortaga infekshinka bakteeriyada, maahan fayras. Antibiyootigyadu waxtar ma leh maxaa yeelay fayras waxaa keena COVID-19. Antibiyootigyada waa inaan loo isticmaalin si looga hortago ama loo daweeyo COVID-19.
MA JIRA TALLAAL wax ku ool ah, DAAWAYN ama DAAWAYNTA COVID-19?
Wali. Ilaa iyo hada, ma jiraan wax tallaal ah ama daawooyin gaar ah oo looga hortago ama looga hortago ama loo daweeyo COVID-19. Si kastaba ha noqotee, dadka ay dhibaatadu saameysey waa inay taxaddaraan si loo yareeyo astaamaha. Dadka aadka u xanuunsan waa in isbitaal la dhigaa. Bukaanka badankood waxay kasoo kabsadaan daryeel taageero ah. Tallaalada suurtagalka ah iyo daaweyn gaar ah ayaa lagu baaraa oo lagu tijaabiyaa tijaabooyinka caafimaad. WHO waxay isku dubaridaa dadaallada tallaalka iyo dadaallada horumarinta daroogada si looga hortago loona daweeyo COVID-19.
CVEID-19 WAA CUDURKA SAAMAYNTA SARS?
Maya, fayraska mas'uulka ka ah COVID-19 iyo fayraska sababa xanuunka daran ee neef-mareenka (SARS) waa hiddo-wadaag, laakiin way kala duwan yihiin. SARS waa mid ka daran COVID-19 laakiin aad ayey u yar yar tahay in la is qaadsiiyo. Wax kiis ah oo SARS ah lagama arag adduunka oo dhan tan iyo 2003.
Ma u baahanahay inaan xidho maaskaro si aan nafteyda u ilaaliyo?
Dadka aan lahayn astaamaha neefsashada sida qufac uma baahna inay xirtaan maaskaro caafimaad. WHO waxay ku talineysaa inay xirato maaskaro bukaanka qaba iyo astaamo la'aan (qufac iyo qandho) oo leh astaamaha COVID-19. Xirashada maaskaro waxay muhiim u tahay xirfadleyda daryeelka caafimaadka iyo daryeel-bixiyeyaasha (guriga ama goobta daryeelka).
WHO waxay ku talineysaa in si caqli gal ah loo isticmaalo maaskaro caafimaad si looga fogaado khasaaraha ilaha qiimaha leh iyo halista si xun u isticmaalka maaskaro. Maaskaro waxaa lagu talinayaa oo keliya haddii aad leedahay calaamadaha neef-mareenka sida qufaca ama hindhisada, haddii calaamadaha khafiifka ah ee COVID-19 laga shakiyo, ama haddii aad raadineyso qof looga shakisan yahay COVID-19. CVEID-19 waa in lagu tixgaliyaa dadka u safray ama u safray gobol halkaas oo kiisaska laga soo sheegay, iyo kuwa xiriir dhaw la lahaa qof jiran.
Sida ugufiican ee aad iskaga ilaalin karto naftaada iyo dadka kale COVID-19 waa inaad gacmahaaga dhaqdid marwalba, afkaaga ku xirto joonyad gacmeed ama gogosha inta aad qufacayso ama aad hindhisayso, ugu yaraan 1 mitir meel u jirta qof kasta oo qufaca ama hindhisto.
SIDEE LAGU SAMEEYAA, U ISTICMAAA, U XAQEEYAA oo U XAQA SAXARADA?
1. Xusuusnow, kaliya xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, daryeelayaasha, iyo dadka qaba astaamaha neef-mareenka (qandho iyo qufac) waa inay xirtaan maaskaro.
2. Kahor intaadan xirin masool, gacmahaaga ku dhaq biyo biyo ah biyo ama saabuun iyo biyo.
3. Hubi in maaskaradu ayan kala dillaacin ama wareemin.
4. Maskaxda ku hago jihada saxda ah (bir bir ah u xir).
5. Hubi in wajiga midabaysan ee maaskarada loo dhigay banaanka.
6. Maska kor saar wejigaaga. Ku adkee xargaha bir ama geeska adag ee maaskaro si aad ugu haboonaato qaabka sanka.
7. Hoos u jiid maskiinka si aad u daboosho afka iyo garka.
8. Ka qaad maaskaro ka dib isticmaalkiisa, ka saar xargaha caagga ah dhegaha gadaashiisa inta aad wejiga ka qaadid wejigaaga iyo dharka si aad isaga ilaaliso taabashada qayb kasta oo maaskaro ah oo wasakheysa.
9. Maskaada ku rid weelka qashinka xiran isla marka la isticmaalo.
10. Kadib marka aad taabatid ama aad tirtirto maaskarada, ku dhaq gacmahaaga saabuunta hawo-mareenka ama, haddii aad si muuqata u wasakhday, saabuun iyo biyo.
Mudo intee leeg ayay tahay wakhtiga CADAR-19?
Mudada cudurka lagu jiro waa waqtiga udhaxeeya caabuqa iyo bilawga calaamadaha cudurka. Waxaa hadda la qiyaasayaa in mudada lagu soo daray COVID-19 ay udhaxeyso 1 iyo 14 maalmood, badanaana waxay qaadataa ilaa shan maalmood. Qiyaasahaan ayaa la cusbooneysiin doonaa markii data cusub la helo.
Dadku ma ka qaadi karaan COVID-19 SUDUXA DADKA DUGSIGA?
Coronaviruses waa qoys ballaaran oo faayras caadi ahaan laga helo fiidmeerta iyo xayawaanka kale. Marar dhif ah, fayrasyadan ayaa ku faafa dadka, kuwaas oo faafin kara cudurka. Sidaa darteed, SARS-CoV wuxuu la xiriiraa ilbaxnimada, halka MERS-CoV la isugu gudbiyo hal humps. Kheyraadka xoolaha ee suuragalka ah ee COVID-19 wali lama xaqiijin.
Si aad naftaada u ilaaliso, tusaale ahaan, markaad aado suuqyada xoolaha nool, waa inaad ka fogaataa taabashada tooska ah ee xayawaanka iyo meelaha xayawaanku ku xirmaan oo had iyo jeer raac xeerarka badbaadada cuntada. Hilibka qaydhiin, caano iyo hilibka xubnaha waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa si looga fogaado wasakheynta cuntada aan loogu talagalin in la kariyo, iyo cunista waxyaabaha ceyriinka ah ama hilibka hoostooda aan la karin.
Xayawaankayga xayawaanka ahi ma gudbin karaa Covid-19?
Maya, ma jirto wax caddayn ah in xayawaannada ama xayawaannada kale sida eeyaha ama bisadaha ay ku dhici karaan ama ku faafi karaan fayraska mas'uul ka ah COVID-19.
Mudo intee leeg ayaan ku noolaan karaa VIRUS SURFACES?
Ma cadda illaa iyo inta uu fayraska mas'uulka ka ah uu kujiro COVID-19 dusha sare, laakiin wuxuu u dhaqmaa sida coronaviruses kale. Daraasadaha (iyo macluumaadka hordhaca ah ee ku saabsan COVID-19) waxay muujinayaan in isku-xidhka loo yaqaan 'coronaviruses' ay ku noolaan karaan dhawr saacadood ilaa dhawr maalmood sagxadaha. Tani waxay ku xirnaan doontaa cabirro kaladuwan (tusaale, nooca dusha sare, heerkulka ama huurka bey'adda).
Haddii aad ka shakisan tahay in sagxad infekshan leeyahay, ku nadiifi jeermis-dileyaal caadi ah si aad u disho fayraska oo aad u ilaaliso naftaada iyo dadka kale. Gacmahaaga ku dhaq biyo biyo ah ama saabuun iyo biyo. Ka fogow taabashada indhahaaga, afkaaga, ama sankaaga.
MIYAAD HALIS LEH INAAD KA XIDHIIDDAHAY DUGSIGII CELID-19 LA SIIYO?
No. Waxaa jira halis yar oo qofka cudurka qaba sumoobaya alaabada, iyo halista COVID-19 inuu la xiriiro xirmo la soo raray, safray oo lagu soo qaaday xaalado iyo heerkul kala duwan.
WAXAAD KA HESHI KARAA INAAD SAMATAR KARIN?
Tallaabooyinka soosocda looma baahna, waxna kama tarayaan COVID-19, waxayna xitaa khatar noqon karaan:
Daaweynta dhirta dhaqameed
Xirashada maaskaro dhowr ah isku mar
Isticmaalidda antibiyootig loogu talagalay is-daawaynta
Si kasta ha noqotee, si loo xaddido khatarta ka sii daraysa infekshanka haddii qandho, qufac iyo neefsashada oo yaraata, la tasho dhakhtar iyada oo aan dib loo dhigin oo aad u sheegtid haddii aad dhawaan safar qaadatay.
SIYAASADAHA Aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee ku wajahan CORONAVIRUS CUSUB
SAMEE gacmahaaga si isdaba joog ah
Gacmahaaga u nadiifi si joogto ah adoo ku xoq jeermiga aalkolada leh ama ku maydh saabuun iyo biyo. Maxaa yeelay, Ku dhaqitaanka gacmahaaga saabuun iyo biyo ama ku xoq jeermi-joojiye alkolo leh ayaa dilaya fayras laga yaabo inay gacmahaaga ku degi jireen.
DIIWAANKA BULSHADA BULSHADA
Ka ilaali ugu yaraan 1 mitir masaafada qof kasta oo qufaca ama hindhisto. Maxaa yeelay, Markuu qof qufaco ama hindhisto, wuxuu buufiraa dhibco yar yar oo dareere ah oo laga yaabo inuu fayras kaga jiro sankiisa ama afkiisa. Haddii aad aad ugu dhowdahay, haddii qofka qufacaya sidoo kale uu jirro leeyahay, waad yareyn kartaa dhibco dhibco ah, oo ay ku jiraan fayraska COVID 19.
Ka dheerow isha, indhaha iyo maskaxda
Maxaa yeelay, Gacmuhu waxay taabanayaan meelaha dusha sare waxaana laga yaabaa inay cudur qaadaan. Kadib, gacmahaagu waxay u gudbin karaan fayraska indhahaaga, sankaaga, ama afkaaga. Laga soo bilaabo halkaas, fayrasku wuxuu ku faafi karaa jirkaaga oo dhan oo uu ku jiran karaa.
Hubso in adiga iyo dadka kugu xeeranba aad ku dhaqanto nadaafad wanaagsan oo neefsashada ah. Tan macnaheedu waa inaad ku daboosho afkaaga iyo sankaaga xusulka ama galka gacmaha ee aad jeceshahay markaad qufacdo ama hindhisto. Ka dib isla markiiba iska tuur nudaha la isticmaalay. Maxaa yeelay, Dhibcuhu waxay soo saaraan fayras. Markii aad isticmaasho nadaafad wanaagsan oo neefsashada ah, waxaad dadka ka agdhow ka difaacdaa fayrasyada sida hergebka, ifilada iyo COVID-19.
HADDII AAD FAHAN KU SAMEEYSAAN FARSAMADA, QALBIGA iyo dhalashada, Hesho Caawimaad caafimaad
Haddii aad caafimaad dareento, guriga joog. Haddii aad leedahay qandho, qufac, iyo neefsashada oo dhib ah, raadso talo caafimaad oo wac dhakhtarkaaga ka hor intaadan tegin. Raac tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka. Maxaa yeelay, Mas'uuliyiinta qaranka iyo kuwa maxalliga ahba waxay heli doonaan macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda deegaankaaga. Soo wicitaanka kahor waxay hubineysaa in bixiyahaaga daryeelka caafimaadka uu si dhakhso leh kuugu hagi doono bixiyeha daryeelka caafimaad ee saxda ah. Tani waxay sidoo kale kaa difaaci doontaa oo kaa caawin doontaa ka hortagga faafitaanka fayraska iyo cudurada kale.
Feejignow oo lasocod tilmaamaha ay kuu siisay CAAFIMAADKAAGA
La soco wixii ku soo kordha COVID-19. Raac tallada ay ku siinayaan xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka ama maamulka caafimaadka bulshada iyo deegaanka ee ku saabsan sida aad naftaada iyo dadka kale uga ilaalin karto COVID-19. Maxaa yeelay, Mas'uuliyiinta qaranka iyo kuwa maxalliga ahba waxay heli doonaan macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan in COVID-19 uu ku faafay gobolkaaga. Waxaa sida ugu fiican loo meeleeyay inay talo ka bixiyaan waxa dadka ka socda agagaarkaaga ay tahay inay sameeyaan si ay naftooda u difaacaan.
HABARGELYADA KA HORTAGA SHAQAALAHA UGU DANBEEYA CVIDID-19 14-kii maalmood ee ugu dambeeyay AMA Waqti dheer
Raac tilmaamaha kor ku xusan. (Tallaabooyinka ilaalinta ee qof walba) Haddii aad bilowdo inaad bogsatid, guriga joog ilaa aad si buuxda uga bogsatid, xitaa haddii aad leedahay astaamo sahlan sida madax-xanuun iyo san duuf ah oo fudud. Sababta oo ah inaad ka fogaato la xiriirka dadka kale oo aadan u aadin rugaha caafimaadka waxay ka caawineysaa xarumahaasi inay si hufan u shaqeeyaan, waxay kaloo kaa ilaalin doonaan adiga iyo dadka kale suurtagal ahaan COVID-19 iyo virus kale.
Haddii aad leedahay qandho, qufac, iyo neefsashada oo ku dhibtoonaada, isla markiiba raadso daryeel caafimaad, maxaa yeelay tan waxaa sababi kara infakshan neefsashada oo hooseeya ama xaalad kale oo daran. Wac wakiilka safarkaaga oo weydii inay la xiriiraan rakaabka. Wac kahor intaadan u tagin dhakhtarkaaga, soo wicitaanka kahor waxay si dhakhso leh kuugu horseedi doontaa bixiyaha daryeelka caafimaad ee saxda ah. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa ka hortagga suurtagalka faafitaanka COVID-19 iyo fayrasyo ​​kale.
Halkan guji si aad u soo degsato pdf Guji.
Maxay yihiin sifooyinka Ankara iyo Ankara Metro?
Maxay yihiin waajibaadka iyo awoodaha Guddiga ee TCDD Gaadiidka Inc. (War Saxaafadeed)
Maxay yihiin Saamaynta Cimilada Gaadiidka